Nkwenye nye Madonna nke 6 Ọgọst 2020 iji nweta ekele
AKISTKỌ AKW OFKWỌ AK .KỌ
Isje Johanna Peerdeman, nke a maara dị ka Ida, amụrụ na Ọgọst 13, 1905 na Alkmaar, Netherlands, onye ikpeazụ n'ime ụmụ ise.
Ida mere nke ọma na October 13, 1917: ọhụhụ ahụ, mgbe ahụ gbara afọ iri na abụọ, kọọrọ ebe ọ hụchara, ebe Amsterdam na-alaghachi n'ụlọ mgbe nkwuputa ya gasịrị, nwanyị mara mma nke ọmarịcha ịma mma, onye ọ chọtara ozugbo na Nwa agbọghọ ahụ amaghị nwanyị. O kwuru na "Nwanyị mara mma" nọ na-amụmụrụ ya ọnụ na-ekwughi okwu, na-emeghe aka ya obere. Ida, na ndụmọdụ nke onye ndu ime mmụọ ya, Nna Frehe ekpugheghị ihe merenụ, n'agbanyeghị na ọ kwughachiri ya maka Satọde abụọ ọzọ.
Epeepe kachasị ogologo malitere na 1945, mgbe onye ọhụụ dị ihe dị ka afọ 35, na Machị 25, oriri nke mkpọchi. Madonna gaara apụta n’ihu Ida mgbe ọ nọ n’ụlọ n’ụlọ nke ụmụnne nwanyị na nna ime mmụọ, Don Frehe: na mberede onye na-ahụ ọhụụ na-adọta ya n’ime ụlọ nke ọzọ site n’ìhè nke ọ matara. «Echere m: ebee ka o sitere, oleekwa ìhè dị iche a bụ? Ebiliri m ịkwaga n'ìhè ahụ, "Ida mechara gwa. “Ìhè ahụ, nke na-enwu n'akụkụ otu ụlọ ahụ, bịara nso. Mgbidi ahụ kwụsịrị n'anya m, ya na ihe niile dị n'ime ụlọ ahụ. Ọ bụ oke osimiri nke ìhè na nke tọgbọ chakoo. Ọ bụghị ìhè anyanwụ ma ọ bụ ọkụ eletrik. Enweghị m ike ịkọwa ụdị ụdị ọkụ ọ bụ. Ma, ọ bụ ihe efu. Ma site na nka efu, ahuru m nwanyi ka o putara. Enweghị m ike ịkọwa ya n'ụzọ dị iche iche ».
Ọ bụ nke mbụ n'ime mkpesa iri isii na isii ga-aga n'ihu afọ 56. Na ngosipụta ndị a, Madonna ji nwayọ kpughee ozi ya: na February 14, 11, ọ tinyere ya n'ekpere ma na-esochi Machị nke anọ na-egosi Ida ihe onyonyo (nke onye na-ese ihe nkiri Heinrich Repke mechara sere).
Ihe onyonyo a gosiputara nne nke Kraist, obe n’azu ya na ukwu ya n’adabere n’elu ala uwa, nke igwe aturu gbara gburu gburu, bu akara nke ndi n’uwa nile, dika ozi a si di, ha gha achota udo site na ichighari. lee anya obe. Aka Mary na-enwete site n'aka Meri.
Banyere maka ikpe ekpere, Nwanyị nwanyị anyị ga-ekwupụta onwe ya na ozi ndị a: "not maghị ike nke ekpere a n'ihu Chukwu" (31.5.1955); “Ekpere a ga - azoputa uwa” (10.5.1953); "Eyere ekpere a maka ntụgharị nke ụwa" (31.12.1951); ya na ikpeghachi ubochi nke ikpeazu “Ekwere m unu na uwa gha agbanwe” (29.4.1951).
Nke a bụ ederede ekpere, nke a sụgharịrị n'asụsụ iri asatọ:
«Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, Ọkpara nke Nna, zitere mmụọ gị n'ụwa. Mee ka Mọ Nsọ biri n’ime obi nile, ka ewe chebe ha pụọ ​​na nrụrụ aka, ọdachi na agha. Ka Nwanyi Niile Mba, Meri di ngozi buru ibu Onye Nkwube anyi. Amen. ”
(Ozi nke 15.11.1951)
Nwaanyị anyị rịọkwara ka o ziga leta Rome, ka ndị popu wee wepụta nkwanye ugwu Marian nke ise gbasara ọrụ Mary dịka Coredemptrix, Mediatrix na Advocate nke mmadụ.
N'ime ozi ndị Madonna kwuru boro Ida na ọ họpụtara Amsterdam ka ọ bụrụ obodo nke ọrụ ebube Eucharistic nke 1345.
Ida Peerdeman nwụrụ na June 17, 1996, mgbe ọ gbara afọ iri itoolu.
Ekelere ọha na eze n'okpuru aha "Nwanyị nke Mba Niile" bụ Mons 31 May 1996 nyere ikike. Henrik Bomers na onye Bishọp Auxiliary n'oge ahụ, Mons Josef M. Punt.
Na Mee 31, 2002, Bishọp Josef M. Punt nyere nkwupụta dị mma nke na-ekwupụta na ikike mmụọ nke Madonna nwere karịrị nke mmụọ nke Madụna, wee si otú a kwado ọkwa ahụ.
← Na post gara aga Gara aga post:Ezi ofufe n'oge nke ụbọchị: na-ezere ihe na-abaghị uru
Ọzọ Post → Post ozo:Amaokwu Bible maka olileanya n’oge ihe siri ike nke mmadụ niile ga-amatarịrị